၂၀၁၈ မှာထွက်ပေါ်လာမဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး OnePlus6အချက်အလက်များ
Change yourself to live an awesome lifestyle.
About Lifestyle Myanmar
လာမည့် ၂၀၁၈ မှာ ထွက်ပေါ်လာမဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး OnePlus6ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
by Kyaw Htike Aung August 29, 2017 015
OnePlus6စမတ်ဖုန်းကို လာမည့် ၂၀၁၈ မှာ မိတ်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ concept အဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။ ၎င်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်လက်တွေက စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးတကယ့်ကို အားရကျေနပ်စရာပါ။ OnePlus6ရဲ့ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားးဟာ ၅.၅လက်မအရွယ်ရှိပြီး AMOLED Display ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Display မျက်နှာပြင်ဟာ အပြည့်ဖြစ်ပြီး ဘေးဘက်မှာ Bezel ဘောင်မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Display မျက်နှာပြင်ရဲ့ အောက်မှာ FingerPrint Scanner ကို မြှုပ်နှံထားပါတယ်။
ကင်မရာအပိုင်းမှာတော့ အရှေ့ဘက်မှာ 16MP ရှိတဲ့ Dual ကင်မရာနဲ့ ကျောဘက်မှာ Dual-LED Flash နဲ့အတူ 25MP ရှိတဲ့ Dual ကင်မရာ စုစုပေါင်း ကင်မရာ ၄လုံးကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ RAM 8GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Internal Storage ကတော့ 32GB, 128GB နဲ့ 256GB ဆိုပြီး သုံးမျိုး သုံးစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung က ၁၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Galaxy Note 8 ကို တရားဝင်ကြေညာ
IP68 Certified ရရှိထားတာကြောင့် ဖုံမှုန်နဲ့ ရေစိုခံနိုင်မှုရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီကို 4000mAh အသုံးပြုထားပြီး ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်လဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Version ကိုတော့ Oxygen OS နဲ့အတူ Android 8.0 Oreo ဖြင့် run ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရောင်၊ ပုလဲရောင် နဲ့ အနက်ရောင် ဆိုပြီး ကာလာသုံးမျိုး ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref – Tech Viral
လန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့“လူအသား” ဆန္ဒပြပွဲကို တရုတ်အင်တာနက်သုံးသူတွေက ရှုံ့ချ
Dual ကင်မရာနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Helio X30 SoC ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Meizu Pro7စမတ်ဖုန်း
Kyaw Htike Aung May 16, 2017
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6inch, RAM 6GB နဲ့ 6020mAh ဘက်ထရီပါဝင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Gionee M6S Plus စမတ်ဖုန်းသစ် ထွက်ပေါ်
Kyaw Htike Aung April 25, 2017
Onboard Storage 128GB ရှိတဲ့ Glaxy C9 Pro မူကွဲ စမတ်ဖုန်းကို ထုတ်လုပ်
Kyaw Htike Aung April 19, 2017
အခြားသူတွေ အပြစ်တင်ရက်စရာမရှိအောင် လှပချင်ရင်တော့ ဒီအချက်တွေသိထားဖို့လိုပြီးနော်။
ဦးထုပ်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကို ဖက်ရှင်ကျအောင် ဆင်မြန်းတတ်စေဖို့
လူငယ်တွေကြား ရေပန်းစားနေပြီး Viu ကနေကြည့်ရှုနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးဘောလိဝုဒ် ဇာတ်ကား ၅ ကား
အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတောင်မှ တစ်နှစ်အတွင်း ငွေအမြောက်အများ စုမိစေမဲ့ နည်းလမ်း ၃ ချက်
ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ လူ၎ယောက်ထဲကမှာ ဘယ်သူက အရှုးမိုက်ဆုံးလဲ။
Health & Beauty (996)
General Knowledge (550)
627 Posts0 Comments
1065 Posts0 Comments
325 Posts0 Comments
Lifestyle Myanmar was established in 2017 which provides information mainly lifestyle and variety of topics including features, Health & Beauty, Celebrities, investigative stories, etc. Relating to Myanmar which is balanced, timely, and accurate for Burmese audiences.
@2018 - lifestylemyanmar.com. All Right Reserved. Digital Media Production in Myanmar